UN-ka oo dalbaday ‘in la xaqiijo in ciidamada Eritereya ay si buuxda uga bexeen gobolka Tigray! - Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka UN-ka oo dalbaday ‘in la xaqiijo in ciidamada Eritereya ay si buuxda...
UN-ka oo dalbaday ‘in la xaqiijo in ciidamada Eritereya ay si buuxda uga bexeen gobolka Tigray!
Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ansixiyay qaraar ku baaqaya in si deg deg ah loo joojiyo dhamaan xadgudubyada ka socda gobolka Tigreega ee Ethiopia ay dagaalada ka socdaan iyo in ciidamada Eriteriya, oo dowladda federaalka ka taageera dagaalka ka dhanka ah xoogaga Tigreega, ay si dhamaystiran uga bexeen wadanka.
Hadalkaan ayaa yimid iyadoo ciidamada Tigreegu ay sheegeen in ay qabsadeen Alamata, oo ah magaalada ugu weyn koonfurta Tigreega, kadib markii ay bilaabeen duulaan cusub labo todobaad ka dib markii ay dawlada federaalku ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah oo hada u muuqata in ay burburayso.
Go’aanka, oo lagu ansixiyay 20 ka mid ah golaha xuquuqda ee 47 xubnood ayaa ogolaaday, 14 ayaa diiday 13 way ka aamustay, waxayna ku baaqday “in si deg deg ah loo joojiyo dhammaan xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo rabshadaha iyo ku tumashada sharciga caalamiga ee bani’aadamnimada”.
Qoraalka ayaa sidoo kale ku baaqay “in si deg deg ah oo la xaqiijin karo ay ciidamada Eritrea uga baxaan gobolka Tigrey”.
Qaraarkan waxaa soobandhigay midowga yurub, oo bogaadiyay xabad joojin hal dhinac ah oo ay kudhawaaqday Addis Ababa bishii lasoo dhaafay iyo waliba kaqaybqaadashada baaritaanka wadajirka ah ee xaalada Tigray. Laakiin waxay ka dhawaajisay in ay aad uga walaacsan tahay xadgudubyada baahsan ee laga soo sheegay gobolka bilihii la soo dhaafay, oo ay ku jiraan dilal wadareedyo loo geystay dad rayid ah iyo rabshadaha galmada ee baahsan.
Gaar ahaan, waxay iftiimisay ka qaybgalka la soo sheegay ee ciidamada Ereteriya ee xadgudubyada halista ah ee halkaa ka dhacay, oo ay ku jiraan ku tumashada sharciga caalamiga ah, taas oo “sii xumaynaysa colaadda”.
Muddo bilo ah, labada dal ee Itoobiya iyo Eriteriya waxay si cad u diideen ku lug lahaanshaha ciidamada Ereteriya khilaafka, laakiin ra’iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ugu dambeyn qirtay joogitaankooda bishii Maarso, wuxuuna sheegay in ay dib uga baxayaan.
Abiy – oo ku guuleystay Abaalmarinta Nabadda ee Nobel ee sannadka 2019, kuna helay isku soo dhowaanshaha maamulkiisa iyo Eritrea – wuxuu ciidan u diray Tigray bishii Nofeembar ee la soo dhaafay si meesha looga saaro xisbiga talada haya gobolkaas oo mar ahaan jiray awoodda ee Tigray People’s Liberation Front (TPLF).
Wuxuu ku eedeeyay in ay abaabulayaan weerarada lagu qaadayo saldhigyada ciidamada Itoobiya ee Tigreega, halka kooxda TPLF ay ku eedeysay dowlada iyo cadowgeedii ay mudada dheer la dagaalamayeen ee Ereteriya in ay ku qaadayaan “weerar abaabulan” oo ka dhan ah.
Kadib sideed bilood oo dagaal arxan daro ah oo ay la galeen ciidamada federaalka, ayay ciidamada Tigreegu bishii hore dib u qabsadeen qaybo badan oo ka mid ah Tigray waxayna dib ula wareegeen caasimada gobolka, Mekelle.
Codbixinta ka hor, wakiilka Ereteriya, Adem Osman Idiris, ayaa dhaleeceeyay qaraarka, isaga oo ku adkaystay in ciidamada dalkiisa ay ka baxeen gobolka. Itoobiya sidoo kale waxay si cad u diiday qoraalka, waxayna sheegtay ina y faragalin ku hayso baaritaanka sii socda ee xaalada Tigray.
Go’aanku wuxuu soo dhoweeyay go’aanka Itoobiya ee ku oggolaanshaha baaritaanka wadajirka ah ee xafiiska xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay, wuxuuna ku boorriyay dowladda in ay hubiso shuruudaha loo baahan yahay “baaritaan buuxa, aan xannibaad lahayn oo madaxbannaan” iyo in lala xisaabtamo dhammaan xadgudubyada.
“Marka loo eego halista xaaladdu leedahay, bulshada caalamku waxay xaq u leedahay in lala socodsiiyo.” Ayaa ku qoran qaraarka.
Madaxa xuquuqul insaanka ee Qaramada Midoobay Michelle Bachelet ayaa golaha u sheegtay bishii la soo dhaafay in baaritaanka wadajirka ah ee la bilaabay bartamihii bishii May la filayo in shaqadiisa la soo gabagabeeyo bisha Ogosto.
Si gooni ah maanta, ciidamada Tigreegu waxay sheegteen inay qabsadeen Alamata, oo ah magaalada ugu weyn koonfurta Tigray, maalin kadib markii ay bilaabeen duulaankoodii ugu dambeeyay ee gobolka buuraleyda ah.
Afhayeen uhadlay TPLF oo lagu magacaabo Getachew Reda ayaa usheegay wakaalada wararka ee AFP in aan balan qaadnay in aan xoreyno taako kasta oo laba jibaaran oo Tigray ah.
“Shalay (Isniin) waxaan duullaan ku qaadnay (gobolka koonfurta) ee Raya waxaana awoodnay inaan gabi ahaanba jabino ciidamada difaaca federaalka iyo ciidamada gaarka ah ee Amxaarada,” ayuu yiri.
“Waxaan awoodnay inaan sugno inta badan koonfurta Tigray oo ay kujiraan Korem iyo Alamata (magaalada ugu weyn ee aagga)”.
Getachew wuxuu sheegay in dagaalku sidoo kale ka dhacayo galbeedka Tigray, oo ah meel uu Mareykanku ka muujiyay walaac ku saabsan isir sifeynta.
Wuxuu intaas ku daray in dagaallamayaashoodu ay weli “ku raad joogaan” dagaalyahannada dowladda taageersan, isagoo intaas ku daray: “Ma dooneyno inaan siino fursad ay dib isugu urursadaan.”
Sheegashada fallaagada si madax-bannaan looma xaqiijin karo sababta oo ah isgaarsiinta inta badan aagga ayey ku maqantahay, halka afhayeen u hadlay millatariga Itoobiya uusan si deg-deg ah uga jawaabin hadalka kooxda.
Previous articleLafta Gareen oo qaabilay wafdi ka socdo Qaramadda Midoobay
Next articleCiidamada dowladda oo howlgal ka sameeyay Xaafado ka tirsan Muqdisho